Malunga nathi -Haining Chengda Machinery Co., Ltd.
AIshishini leNdebe yeziXhobo zeNdebe yePhepha
IHaining Chengda Machinery Co., Ltd. yasekwa ngonyaka ka-1998. Kwiminyaka engama-20 edlulileyo, uChengda ngumenzi okhethekileyo kwimveliso yezixhobo zephepha. Uluhlu lwethu lwemveliso lugubungela indebe yephepha elizenzekelayo, isitya, isiciko kunye noomatshini bokwakha ityhubhu kunye noomatshini bokuhlola.
Nesebe layo le-R & D, uChengda unetekhnoloji ekhokelayo koomatshini bemveliso yamaphepha. Ukuphuculwa rhoqo, imibono emitsha kunye nezixhobo zangoku ezikhoyo ezikhokelela koomatshini beChengda kumgangatho obalaseleyo kwihlabathi liphela. Isebe le-R & D lobungcali, iqela lokuthengisa kunye neqela emva kokuthengisa, banikezela ngenkonzo epheleleyo.
Ngokusekwe kumava eminyaka engama-20 edlulileyo, uChengda waziwa kakuhle hayi e-China kuphela, kodwa nakwihlabathi liphela. Oomatshini bethu bathumela e-USA, e-EU, eJapan, kwimpuma esembindini nase-Afrika, kumazwe angaphezu kwe-100.
Iimveliso zethu zinekhwalithi elungileyo kunye nekhredithi yokuvumela ukuba sikwazi ukuseta iiofisi zamasebe kunye nabasasazi ngaphandle kwe China